चाणक्य नीति अनुसार यस कारण जरुरी छ नुहाउनु । चाणक्य प्राचीन समयका एक महान दार्शनिक तथा सम्राट चन्द्रगुप्तका सल्लाहकार थिए। उनले अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदिका महान ग्रन्थहरू रचना गरेका थिए। उनले जीवनमा जो अनुभव प्राप्त गरे, जुन नियम बनाए ती आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । उनी कुटिल रणनीतिकार समेत थिए । उनले आफ्नो कुटनीतिको बलले […]
चाणक्य नीति अनुसार राम्रो नेता र सफल मानिस बन्न चाहिने ४ गुणहरु । चाणक्य प्राचीन समयका एक महान दार्श्निक तथा सम्राट चन्द्रगुप्तका सल्लाहकार थिए । उनले अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदिका महान ग्रन्थहरू रचना गरेका थिए। चाणक्य नीति चाणक्यद्वारा नीति नियम सम्बन्धी अनेक कुराहरु लेखिएको ग्रन्थ हो । अरु कुनै ग्रन्थमा नपाइने विषयहरु रहेकाले यो पूरा विश्वभरमा पढ्ने […]
जीवन परिवर्तन गर्ने चाणक्यका अनमोल १७ वाणीहरु ! चाणक्य प्राचीन समयका एक महान दार्शनिक तथा सम्राट चन्द्रगुप्तका सल्लाहकार थिए। उनको शिक्षादीक्षा प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालयमा भएको मानिन्छ । सानो उमेरदेखि नै होनाहार विद्यार्थीको रुपमा चिनारी बनाएका चाणक्य एक महान चिन्तक थिए । उनले अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदिका महान ग्रन्थहरू रचना गरेका थिए। उनले जीवनमा जो अनुभव प्राप्त […]
जीवनमा यी ४ कामहरु अधुरो छोडेमा सधै दु:खी हुनुहुनेछ ! मानिसको जीवनमा उतारचढाव त भई नै रहन्छ । प्राय: मानिसको इच्छा र आकांक्षा असीमित हुन्छ तर प्राप्ति भने कम नै हुने गर्छ । नीति शास्त्रमा लेखिएको छ यस्ता काम कहिले पनि अधुरो छोड्नु हुँदैन, नत्र जिवनभरी पछुताउनु पर्छ । जीवनमा सुखी रहन यी ४ काम […]
चाणक्य प्राचीन समयका एक महान दार्शनिक तथा सम्राट चन्द्रगुप्तका सल्लाहकार थिए। उनको शिक्षादीक्षा प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालयमा भएको मानिन्छ । सानो उमेरदेखि नै होनाहार विद्यार्थीको रुपमा चिनारी बनाएका चाणक्य एक महान चिन्तक थिए । उनले अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदिका महान ग्रन्थहरू रचना गरेका थिए। उनले जीवनमा जो अनुभव प्राप्त गरे, जुन नियम बनाए ती आज पनि उत्तिकै […]
थाहा पाउनुहोस्, प्रेममा कहिलै धोका नदिने ५ राशिका युवतीहरु !
एजेन्सी, ज्योतिषको अनुसार यी ५ राशिका युवतीहरु जसले आफ्नो पार्टनरलाई कहिले पनि धोका दिँदैनन् । वृष राशि वृष राशिका मानिसहरु धेरै नै शान्त स्वाभावका हुन्छन् । जुन युवतीको राशि वृष हुन्छ उनी प्रेमको सम्बन्धमा कहिले पनि धोका नदिने खालकी हुन्छिन् भन्ने मान्यता छ। यस राशिकी युवतीले आफ्नो पार्टनरलाई धेरै नै माया गर्छिन् । कर्कट राशि […]
MBBS को आरक्षित सिटलाई सर्वोच्चको आदेश
३० पुस, काठमाण्डौ । एमबीबीएसको आरक्षित सिटलाई सहुलियतमा परीणत गर्ने चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम) को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आन्तरिम आदेश दिएको छ । आईओएमले २५ पुसमा आरक्षित सिटका लागि निर्धारण गरेको मापदण्ड पुरा नभएको भन्दै सहुलियत सिटमा परीणत गरी ओपन होउस काउन्सिलिङमार्फत भर्ना गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अजयकुमार पासी […]
सर्वोच्च तर्फवाट बहस सकियो, डा. केसीको पक्षमा बहस हुदैं
२६ पुस काठमाण्डौ । डा. गोविन्द केसी विपक्षी रहेको अदालतको अपहेलना सम्वन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासमा जारी बहसमा सर्वोच्च प्रशासनका तर्फवाट नेत्रबन्धु पौडेलको टिप्पणीमा दायर मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्यामप्रसाद खरेल, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, रमनकुमार श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरु लक्ष्मण थपलिया, दीपककुमार विष्ट लगायतले बहस गरिसकेका छन् । […]
२६ पुस, काठमाण्डौ । वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमग्राम ताहचलमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति (नयाँ, नवीकरण र लिगलाइजेसन) मा अनलाइन टोकन प्रणाली लागू गरेको छ । अब छिटो अनलाइन फारम भर्नेले छिटो काम हुने गरी टोकन नम्बर पाउनेछन् । विभागमा सेवाग्राहीको भीड बढेर सेवा सम्पादनमा समस्या आएपछि विभागले विभागको काठमाडौं कार्यालयमा टोकन प्रणाली लागू गरेको हो । […]
मल्ल होटललाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
२४ पुस, काठमाण्डौ । बेल्लीज नेपाललाई मल्ल होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । मल्ल होटलले बक्यौता नतिरेको कारण देखाउँदै पर्यटन विभागले क्यासिनो सञ्चालन पूर्व स्वीकृति सम्वन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने भनि पत्र पठाएको थियो । त्यसविरुद्ध बेल्लीज नेपालका ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले हालेको मुद्दामा सुुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले विभागको […]
प्रदेश-१ को राजधानी विराटनगरलाई बनाउने
१८ पुस, विराटनगर । राजधानीका लागि प्रदेश नम्वर १ को विराटनगर सम्भावना बलियो भएको छ । विराटनगरलार्इ सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकामको खाकामा समावेश गरेसँगै राजधानीका लागि विराटनगरमा सम्भावना बनेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयले विराटनगर,इटहरी,धरान र धनकुटामा प्रदेश राजधानी राख्न रस्साकस्सी चलिरहँदा प्रदेश नम्वर १ को अस्थायी मुकाम विराटनगर राख्ने […]